यी पूर्व माओवादी नेता प्रधानमन्त्री ओलीका प्यारा, मन्त्री बन्ने लाइनमा « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १२ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता संकटमा पर्दा केही पूर्व माओवादी नेताहरुबाट ठूलै साथ पाए । आफूलाई पर्दा साथ दिनेको गुन तिरेरै छाड्ने स्वभावका ओलीले यसपटक ती नेताहरुलाई पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीका प्यारा बनेका पूर्व माओवादी नेताहरु मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । उनीहरुलाई बालुवाटारले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ । कतिपयले दौरा सुरुवाल ठिक्क पारेका छन् ।
बालुवाटारबाट ग्रीन सिग्नल पाएका पूर्व माओवादी नेताहरुमा टोपबहादुर रायमाझी र जर्नादन शर्मा प्रभाकर छन् । दुवै जना ओलीका प्यारा बनेका छन् । उनीहरुले सत्ता संकट पर्दा ओलीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिएका थिए । दुवैजना मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।
हरिबोल गजुरेलप्रति पनि ओली सकारात्मक बनेका छन् । तर, उनले मन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् ।
ओलीलाई खुलेर साथ दिनेमा उद्दोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि हुन् । उनी प्रचण्ड खेमाको बैठकमा सहभागी पनि भएनन् । मन्त्री भट्टले चलाइआएको मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनको मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्छ । तर, भट्टलाई सरकारमै राख्ने ओलीको चाहना रहेको बुझिएको छ ।
राजीनामा मागिंदा ओलीप्रति नरम बनेका दिनानाथ शर्मालगायत पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । मणि थापा सांसद छैनन् ।-तस्वीरः रिपोर्टर्स नेपाल
‘अन्य देशमा कोरोना भ्याक्सिन प्रयोगमा आउनेबित्तिकै नेपालमा पनि उपलब्ध गराउँछौं : डा. खेम कार्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य
उपत्यकामा एकैदिन ७२३ संक्रमित थप
काठमाडौं, १७ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकामा आज एकै दिन ७ सय २३ जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं, १७ मंसिर । कोरोना संक्रमणबाट आज थप ९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै
देशभर आज १४ सय ९० संक्रमित थपिए
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपालमा कोरोना भाइरसका आज १४ सय ९० जना संक्रमित थपिएका छन्
ओली-प्रचण्ड विवाद, तीन दिनपछि वारपार
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । अबको तीन दिनमा
तनहुँ, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अधिनायकवादी भन्दै देउवाले ओली सरकारलाई दिए कडा चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी भन्दै चेतावनी दिएका